Ololaha doorashada Sweden oo gabagabo maraya | Somaliska
Ayadoo maalin khura ay ka harsantahay doorashada guud ee Sweden ayaa waxaa si habsi ah ku socda olalaha doorashada, ayadoo xisbiyada ay isku dayayaan in ay kasbadaan codbixaasha aan wali go'aan ka gaarin cidey u codeyn lahaayeen. Xulufada xisbiyada talada haya ayaa ku horeeya cododka ayadoo la filayo in ay ku guuleystaan cododka ugu badan balse aan la hubin in ay akhlabiyad heli karaan iyo in kale. Balse arinta ugu yaabka badan ayaa ah ayadoo taageerada ururka cunsuriga ee loo yaqaan Swedish Democrats ay aad u korortay ayadoo la filayo in ay soo galaan aqalka baarlamaanka markii ugu horeysay. Sidoo kale xisbiyada waaweyn ayaa isbuucaan balan qaadey in aysan la shaqeyn doonin cunsuriyiinta haddii ay baarlamaanka soo galaan.
Ololaha doorashada Sweden oo gabagabo maraya
Ayadoo maalin khura ay ka harsantahay doorashada guud ee Sweden ayaa waxaa si habsi ah ku socda olalaha doorashada, ayadoo xisbiyada ay isku dayayaan in ay kasbadaan codbixaasha aan wali go’aan ka gaarin cidey u codeyn lahaayeen.
Xulufada xisbiyada talada haya ayaa ku horeeya cododka ayadoo la filayo in ay ku guuleystaan cododka ugu badan balse aan la hubin in ay akhlabiyad heli karaan iyo in kale.
Balse arinta ugu yaabka badan ayaa ah ayadoo taageerada ururka cunsuriga ee loo yaqaan Swedish Democrats ay aad u korortay ayadoo la filayo in ay soo galaan aqalka baarlamaanka markii ugu horeysay.
Sidoo kale xisbiyada waaweyn ayaa isbuucaan balan qaadey in aysan la shaqeyn doonin cunsuriyiinta haddii ay baarlamaanka soo galaan.
Jaamacadaha Sweden oo kaalin ka galay aduunka
Dhaqaalaha Sweden oo laga yaabo in uu soo xumaado